ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများနှင့်အတူဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်ထမ်းခေါ်ယူမှု & အလုပ်ရှာဖွေရေး🥇
ဒူဘိုင်းအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်ထမ်းခေါ်ယူမှု & အလုပ်ရှာဖွေရေး⭐⭐⭐⭐⭐
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at နိုဝင်ဘာလ 4, 2017
ဒူဘိုင်းအတွက် Careers ဘို့ Apply
ဒူဘိုင်း Jobs Opportunities. Over 25,000,000 visitors for one thing in the United Arab စော်ဘွားaဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများ သူတို့ကအင်တာနက်ထဲကနေ source နိုင်ပါတယ်သလောက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအရစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပေါင်းသည်တလုံးရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ လက်ရှိတွင်ဒူဘိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေကြသူ. ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ has put some information about Recruiters for jobs in Dubai in 2018 with this in mind we will support you and guide you in your job searching in the ယူအေအီး. But in the meantime, our company we would like to start fromaguide and overview of the Dubai economy and gives you more info about ဒူဘိုင်းနှင့်မွန်ဘိုင်းစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ.
အဆိုပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု in the foreground they are just after ဆော်ဒီအာရေဗျ. Up to the present time, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏စီးပွားရေးသည် ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ GCC တစ်ကမ္ဘာလုံးဆော်ဒီအာရေဗျများတွင်အလုပ်အကိုင်များအတွက်။ 1996 ယူအေအီးမှတက် 2018 ထံမှခဏမှာတော့ 770 အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.1 ဘီလျံ (AED 2016 ထရီလီယံ) ၏စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) ကိုတိုးမြှင့်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျသငျ့သညျ အဆိုပါငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများမှာလည်းကြည့်ရှု။ သူတို့ထဲကတချို့ယူအေအီးကြီးထွားလာနေကြတယ်လို့ပဲ။ ဥပမာ, Careerjet-ဒူဘိုင်းအလုပ် site ကို နှင့် Monster စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်သော်လည်း ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှရရှိသောဝင်ငွေပေါ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းစီးပွားရေးအလွန်အမင်းမှီခို။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီကိုအောင်မြင်စွာ 1995 ကတည်းက၎င်း၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တွင် ရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံဓာတုလုပ်ငန်းကဏ္ဍကနေကောက်ချက်ယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရေတွင်းအာရပ်ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုသိဖြစ်လာဖို့မပေါက်ပါဘူး။ အောက်တွင် သငျသညျအလုပျမှထိပ်တန်း rated ကုမ္ပဏီများမှရှာတှေ့နိုငျ တစ်ဘို့ important company where you can ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ယူအေအီးအတွက် (နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း)
ဒူဘိုင်းဂျော့ - ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်
ဒူဘိုင်းဂျော့မှာ Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်ဟိုတယ်
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုတယ် ကုမ္ပဏီအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာကျော် 5,700 ဟိုတယ်အတွင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဟိုတယ်အုပ်စုသည်အစအဦးများတွင်လို့ခေါ်တဲ့နိဒါန်း program ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အသစ်၏ရည်ရွယ်ချက် အငယ်တန်းမန်နေဂျာများစုဆောင်း။ အမှုတို့ကိုပြုရနိုင်ရန်အတွက်သစ်မန်နေဂျာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ဟိုတယ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့မိတ်ဆက်ရ ဟိုတယ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု, စံချိန်စံညွှန်းများ, သမိုင်းနှင့်အရောင်းပစ်မှတ်ရန်။
အဆိုပါ Marriot အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုတယ်နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သစ်ကို အိန္ဒိယကနေပြည်တော်ပြန်ယူအေအီး၏မြို့တော်ထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ Mariott ဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယဉ်ကျေးမှု၏သရုပ်ဖော်ပုံနှင့်အမျှ၎င်းတို့၏အသစ်များကိုန်ထမ်းလည်းရှိပါတယ် အလုပ်မလုပ်ဖို့ option ကိုပေးထား at ဒူဘိုင်းမြို့ Marriott hotel. And if they looking forward to ကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုကျော်ဟိုတယ်၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရှေ့ဆက်ကူညီပေးသည်အခြားသော့ချက်အချက်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုတယ်၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများဂရုစိုက်သောအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ၏တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် FedEx Express ကို
မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ FedEx ကုမ္ပဏီကို လုပ်ဆောင် ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမတို့အဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှု။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအမြင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းရဲ့အမှတ်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ FedEx နှင့်အတူကောင်းစွာထောက်ပြဖို့သူတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအကျိုးအမြတ်လမ်းထွက်ထားတော်မူ၏။ ဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားတိုးတက်မှုဆုချီးမြှင့်မှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာမှာတော့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထွကုမ္ပဏီစနစ်ကတစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ကအသိအမှတ်ပြု ကုမ္ပဏီ၏စံမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်သွားသူကိုအဖွဲ့ဝင်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီဝန်ထမ်းဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းရှာဖွေနေ ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာအတွက်အသစ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်.
အဆိုပါ 2018 အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်စုဆောင်းကုမ္ပဏီ။ နိုင်ငံတကာကစားသမားဘရှာဖွေနေသူဒီကုမ္ပဏီကိုချစ်။ ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်အတူထားရှိခံရဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်လို့ပဲ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကုမ္ပဏီအများအပြားအလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းတစ်ရက်ခံရကြ၏။ ဒါကြောင့်သင့် CV နှင့် cover letter ကိုကောင်းစွာကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း, ကုမ္ပဏီတကမ္ဘာလုံးစုဆောင်း။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် FedEx Express ကိုအတူ GCC ဧရိယာအတွင်းကောင်းသောနေရာလွတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် DAMAC Properties ကို
DAMAC Properties ကို ဒီအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်းတို့၏နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်း rated အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်။ အထက်ပြထားတဲ့အတိုင်း DAMAC 2002 ကတည်းကအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် GCC ဇိမ်ခံအိမ်ခြံမြေစျေးကွက်၏တစ်ဦးလူတန်းစားအတွက်တကယ်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် DAMAC Properties ကိုဒူဘိုင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်များနှင့်ဇိမ်ခံလူနေအိမ်ကမ်းလှမ်းမှုပို့ဆောင်စကားပြောခြင်း။ အဆိုပါ အင်ဒီးယန်းအဘို့အ gulf အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ အကျိုးဆက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတလွှားစီးပွားရေးနှင့်အပန်းဖြေဂုဏ်သတ္တိများစျေးကွက်အပေါ်နေ့တိုင်းကြီးထွားလာ။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, ဆော်ဒီအာရေဗျ, ကာတာ, ဂျော်ဒန်, အီဂျစ်, လက်ဘနွန်, တူရကီနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အပါအဝင်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း DAMAC ကုမ္ပဏီစျေးကွက်၏။ ကျိန်းသေရှင်းမှ, DAMAC Properties ကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ဇိမ်ခံအိမ်ခြံမြေဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဖြစ်ပါသည် အသစ်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်း VACANCY နှင့်စော်ဘွားများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်။ ဒီကုမ္ပဏီထဲမှာအဘယ်သူမျှမမေးခှနျးကဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၌မသာအိပ်မက်နေအိမ်များများကိုကြိုးပမ်း။ ဒါပေမဲ့အတူ ထူးခြားတဲ့လူနေမှုသဘောတရားများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း 2015 ကတည်းကကာတာနိုင်ငံ၌တည်၏။ ဖောက်သည်များနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့ယူအေအီးအတွင်းရှိတစ်ကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများသည်။
ပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးလူသိများကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ။ ပါကစ္စတန်နှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးပြည်တော်ပြန်အများစုဟာ. Trying to findajob with DAMAC properties. On the other hand, if you want to findajob in Dubai. You should consider DAMAC because in this company it isalot of opportunities ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ဒါကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူစတင်!.
ဒူဘိုင်းဂျော့ ACC - အာရေဗျ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ
ACC (အာရေဗျဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ) created သရုပ်ပြ ဒူဘိုင်းအဆောက်အအုံများပါဝါ။ ACC 1967 အတွက်လေဗနုန်တောခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပေမယ့်သေချာပေါက်တစ်ဦးဦးဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်လာခဲ့သည် အဆိုပါ GCC ဒေသတွင်း၌မြဲမြံစွာ။ ကုမ္ပဏီအစုစုကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရနှင့်ခေတ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးပါဝင်သည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီယူအေအီးကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများများအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးပေးစွမ်းသည်။ တကယ်တော့, 51 နှစ်ပေါင်းအာရေဗျဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအဘို့, ယူအေအီးအတွက်မြင့်မားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိသည်နှင့်ဤကဲ့သို့သောဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီ, ဒိုဟာနှင့်လန်ဒန်အဖြစ်အဓိကမြို့ကြီးများရဲ့ Skyline shaped ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦးကုမ္ပဏီကအခြေခံအဆောက်အအုံသတ်မှတ်ထား ကြီးမားသောစက်မှုကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်.
တဖန် ACC ကာတာနိုင်ငံအတွက်အံ့သြဖွယ်မှတ်တိုင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ များအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းအတွက်ဧညျ့ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ သော်လည်းနေ့တိုင်း $ 3,600,000 စီးပွားရေးနှင့်လူနေအိမ်စီမံကိန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲ။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်မူကုမ္ပဏီအတွက်အဓိကအာရုံစိုက်အမြင့်ဆုံးကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်အရည်အသွေးမြင့်စီမံကိန်းများပို့ဆောင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်၏အနာဂတျအတှကျအာရပ်စီးပွားရေးလောကအတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများ။
Acc Arabia construction company is very good for local workers. Firm working hard to provide new jobs in Dubai for အိန္ဒိယ. We are now helping ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်။ သင်ကယူအေအီးအတွင်းအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဤအတူ အံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီ.
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် - အယ်လ် Hokair Group မှ
al-Hokair Group မှခုနှစ်တွင်ဂျော့ဘ် တကယ်တော့ Alhokair အုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ် ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ဒူဘိုင်းဘလော့ဂ်နှင့်အတူဒူဘိုင်းစီးတီးတွင်ထင်ရှားခဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဟိုတယ်များအဖြစ်ဖက်ရှင်တွေဆိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲအာရပ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဧညျ့နှင့်ဖျော်ဖြေရေး Alhokair အုပ်စုတစ်စု၏အလငျး၌။ ဒူဘိုင်းအတွက်အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွက်လည်းလူသိများသည် အလုပ်ရှာဖွေဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူ legit အကူအညီနဲ့. Moreover, Al Hokair Fashion Retails and was established in contrast when UAE start developing စီးပွားရေးလုပ်ငန်း it was 1990. Asamatter of fact, ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလည်ပတ်ယူအေအီး၌မသာအများအပြားအမျိုးမျိုးသောဒေသများအနှံ့ပြန့်နှံ့ ဒါပေမယ့်လည်း, ဆော်ဒီအာရေဗျ, MENA, ဗဟိုအာရှနှင့်ဥရောပဒေသများဒမ်း။ သူတို့စီမံခန့်ခွဲကုမ္ပဏီများ၏နမူနာ: ငှက်ပျောသီးသမ္မတနိုင်ငံ, Bershka, ကော်စတာကော်ဖီ, Stradivarius, Topshop, Zara နှင့်များစွာသော ဒူဘိုင်းတွင်ပိုမို.
al-Hokair Group မှ - ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်
တူညီတဲ့ဖက်ရှင်အတွက်, ကော်ပိုရေးရှင်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းပထမအမည်ကိုဖြစ်လာသည် နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ။ ဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်စိတ်မှကြွလာသောအခါကာတာနိုင်ငံ၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ အာရေဗျကမ္ဘာကိုလာခရီးသွားလုပ်ငန်းလှုံ့ဆော်နေကြသည်ကတည်းက ပညာရှင်ပီသစွာကြီးထွားဖို့။ ကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုမှအညီအမျှအရေးကြီးသောအုပ်စုရှိတ် Abdulmohsin Alhokair ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဧညျ့သစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထို့ပြင် 1975 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့5ဆယ်စုနှစ်ကျော်စိတ်ထဲ၌ဤအတူ တိုးချဲ့အုပ်စုရဲ့စီမံကိန်းများ ရုံယူအေအီးအတွက် 79 ဖျော်ဖြေရေးစင်တာအထိကိုအလေးပေးရန်။ al-hokair နှင့်အတူနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်သူတို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကာတာအတွက် 34 ဟိုတယ်များဖြန့်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ် hokair အဖွဲ့များသည် ပိုလတ်ဆတ်များအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူ expatriates.
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် - Ericsson ကကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စျေးကွက်မှာတော့ Ericsson က company hasasystem in နေရာ ဒူဘိုင်း၌ရှိသောအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်. To put it another way, they now hiring engineers and developers in Dubai. With attention to မိုဘိုင်းဖုန်း recruitment that စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားသေချာ so the company hires people who are closely connected with its culture mobile phone and kind of WhatsApp ကို developers. Important to realize this enables သူတို့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုကုမ္ပဏီအတွက်အောင်မြင်ဖို့အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများ.
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဒီကုမ္ပဏီ ဆဲကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွင်း operating။ အပြုသဘောဘက်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီကိုဝန်ထမ်းများအတွက်မြှင့်တင်ရေးစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့်အိမ်သူအိမ်သားမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတွင်းအပြင်အလွန်လွယ်ကူရဖို့အငယ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဖွကြောင်းဒါ။ Ericsson ကအပြာရောင် chip ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကုမ္ပဏီများအတွင်းအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ၏တစ်ခုဖြစ်သည်။
Ericsson ကကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအသစ်အအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်း။ အထူးသဖြင့် သင်ယူအေအီးအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များရှာနေလျှင်။ ဤသည်နှင့်အတူအလုပ်စတင်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ၏တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်သည်သူတို့၏ website တွင်ရှာဖွေ start သငျ့သညျ။
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် - Omnicom Media Group သို့ Mena
နောက်ထပ် key ကိုအမှတ် ဒူဘိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် ဖြစ်နိုင်တယ် Omnicom Media Group သို့ (လုလင်ပျို)။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဝန်ထမ်းများအိမ်တအိမ်အတွင်း၌အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်-ဘဝလက်ကျန်ငွေကိုခံစားစေလိုသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, လုလင်ပျိုများ၏ကျင့် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုအပေါ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ။ ဝန်ထမ်းကသူတို့အလုပ်ခွင်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အပြုသဘောနှင့်ဆိုးကျိုးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရေးသားဖို့အဘယ်မှာခွင့်ပြုပါတယ်။ Omnicom Media Group သို့ သိသိသာသာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘဝချိန်ခွင်လျှာအပေါ်အလေးပေး.
၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားကုမ္ပဏီတစ်ခုဝန်ထမ်းပေါင်းစည်းသင့်ပါတယ်ဘယ်မှာဦးဆောင်ထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည် ဒူဘိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းအံ့သြဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုသို့, ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းကိုလည်းအဖွဲ့အစည်းထားရန် စစ်မှန်သောအလုပျသမားအပျနှံနှင့်ကတိကဝတ်အတော်ပင်အထူးသဖြင့်လုလင်ပျိုအကြီးတန်းခေါင်းဆောင်များ မှစ. , GPTW Institute ကဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် LinkedIn တို့အပေါ် Omnicom Media Group သို့စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် - DHL ကို Global Logistic
ဒူဘိုင်းအတွက် DHL ဂျော့ဘ်, အမှတ်မကြာခဏများအတွက်သတိမမူ ဒူဘိုင်းအတွက်မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်များ ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် DHL နှင့်အတူစကားပြော သငျသညျလေဆိပ်အလုပ်အကိုင်များဘို့ရာအရပျ၌သငျဒူဘိုင်းရှာဖွေစုဆောင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်တိုင်း tool ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ကုမ္ပဏီရက်သတ္တပတ်အတွင်းကသင်၏အလုပ်သစ်ကိုစတင်သင်မည်သို့ပြပါ။ DHL နှင့်အတူသင်၏လျှောက်လွှာအနှစ်ချုပ်ရန်။ လူတိုင်းကဒီမျိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအလုပ်အကိုင်များ.
ဒီဒူဘိုင်းအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, သင်တို ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အောင်မြင်မှုနှင့်ခရီးသွား၏အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်း။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, DHL အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အလွယ်ကူသောလျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကိုပေးပါသည်။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ကုမ္ပဏီသင်က်ဘ်ဆိုက်အဖြေပေါ်တဲ့အနိုင်ရလျှောက်လွှာနှင့်ကုမ္ပဏီရေးသားဖို့ဘယ်လိုပေါ်အကြံပေးချက်များလေ့ DHL ကုမ္ပဏီအတွင်းမှပြုပြင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမေးသော်ပေးသည်။ ဒီကိစ္စမှာ, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်သည်သင့် လူကြီးမင်း၏ CV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တင်ပြ သို့ ပက်စီအလုပ်အကိုင်များ ကုမ္ပဏီ။ အချိန်တန်ခုနှစ်တွင်ပက်စီသငျသညျကိုပဌနာပါလိမ့်မယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကိုသင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်နေကြသည်အဖြစ် သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပွဲစဉ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားပါ။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့ကုမ္ပဏီမပေးရုံသာဒူဘိုင်းအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုငှားရမ်း။ ဥပမာများအတွက် တောင်အာဖရိကကနေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူ။ ထိုအတောအတွင်းပက်စီအတွက်လုပ်သားများကလူမူရင်း Pepsi အရသာပေးသည်မှစူပါကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပက်စီန်ထမ်းများနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်အမြဲတောင်းပန်နှင့်ဖောက်သည်များလိုအပ်သောအာဟာရဖွံ့ဖြိုး။
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် - တပရိဘောဂဒူဘိုင်း
၏ the One ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောဂကုမ္ပဏီနှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားပြောင်းလဲပါ။ ပရိဘောဂလက်လီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဗဟိုချက်၌, နေ့စဉ်အလုပ်ရှာဖွေသူများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီဟုယုံကြည်ကြသည် တစ်ပိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ တဦးတည်းကုမ္ပဏီကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေချင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်။ ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေကိုရှာဖွေနေ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် cover letter ကိုအစိုးရကုမ္ပဏီများအား Send။ တကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့လျှောက်ထားသည့်အနေအထားနှင့်တိုင်းပြည်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
သူတို့အခွအေနမြေိုးက The တဦးတည်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်သမားပရိဘောဂကမ်ဘာပျေါတှငျ core ကိုတန်ဖိုးများကိုမျှဝေသောသူကိုအခြားသူများကဲ့သို့တူညီသောရူပါရုံကိုရှိပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း Love, အမှုကိုပွုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည် Get။ အကျိုးဆက်ကဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်တို့သည်ဤတန်ဖိုးများကိုလိုကျနာဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်း။ သင်ပင်သင်သည်ထိုလူတစ်ဦးမဟုတ်ပါလျှင်လျှောက်ထားရန်မကြိုးစားပါဘူးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အဘို့။ အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ MBA ဘွဲ့နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေကြသူအမှုဆောင်အရာရှိ.
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - ၏ The One ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်ခွင်
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဘို့, THE တစ်ခုမှာကုမ္ပဏီ အာရှတိုက်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့ 7th အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းခွင်အမည်ရှိတဦးဖြစ်လာနှင့်ယူအေအီးရဲ့ No.1 ဒေသခံမဲပေး အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်မုဆိုးများအတွက်အလုပ်ရှင်. At the same time, The One becomesa2nd Best Workplace since 2016 on WhatsApp ကိုအုပ်စု။ သို့ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီနှင့်အတူစတင် in the retail market. You can get very good ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ. All ofasudden company take you to be part of an exciting sales and marketing team so you can သူတို့ကိုအာရဗီကမ္ဘာ့ဖလားကိုပြောင်းလဲကူညီ.
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် - ဒူဘိုင်းအတွက် Dell ကအဖွဲ့ကို Join
အဆိုပါ Dell ကအဖွဲ့ကို Joinကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ၏ရုတ်တရက်တဦးတည်း၏အပေါငျးတို့သဒဲလ်မှာအလုပ်ရှာဖွေရေး Start ပါကစ္စတန်အလုပ်သမားတွေအတွက်။ သင်တစ်ဦးအဆုံးမဲ့ရှာတှေ့နိုငျဒူဘိုင်းအတွက် Dell ကကုမ္ပဏီအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်မှာတခါထဲ ဒူဘိုင်းအတွက်ပါကစ္စတန်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း. where isachallenge and reward career in UAE? Important to realize Dell have an opportunity across the globe in India, Europe, the U.S.A and ကေနဒါ. Another key point with this company isaအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အသင်း.
တဦးတည်းအရာများအတွက်, ကုမ္ပဏီအတွင်းပိုင်း-အပြင်ဘက်ခိုင်မာတဲ့အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပူးပေါင်းကမီးလောင်ရာ။ ဒီစိတျထဲတှငျကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, 2019 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှု ငှားရမ်းခြင်းနှင့်အသေးစိတ်အတွက်အသုံးပြု ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်း။ ပြိုင်ဘက်များကသူတို့ကို Dell ကတိုက်ခိုက်ဖို့ဦးမည်စိုးရိမ်စရာရှိ၏ ဒူဘိုင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်၏ဖွင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကြောင့်စမတ်ဆက်ကပ်အပ်နှံလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတာဝန်များကိုလုပ်နေတာနဲ့ Dell ယူအေအီးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်များအတွက်ရောင်းချမှုနှင့်အိုင်တီအောင်မြင်မှုကားမောင်း။
အဆုံးမှအကြောင်း, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ, အာရှအတွက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ရာထူးအဖြစ်ဒဲလ်နှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရနိုင်, အင်ဂျင်နီယာ ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းDell က, အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု, စစ်ဆင်ရေးအလုပ်အကိုင်များ, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးဒေသခံရာထူး, ရှေ့နေပညာရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင် Dell ကရှာဖွေစုဆောင်းတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများနှင့်ဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဤမျှလောက်ပိုပြီးအလုပ်နေရာလွတ်ဘို့.
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ပြေးရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်မှာပေါ်ရေးသားနေကြသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်။ သူတို့ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အေဂျင်စီများငှားရမ်းသောကွောငျ့ Dell က run မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ အသေးစိတ်အတွက်, သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု 100% ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးနိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်အမုဆိုးများအတွက်။ Dell ကကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များဘို့ခိုင်ခံ့တန်ဖိုးများနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်အလုပ်ခွင်ဖန်တီးဒူဘိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုစီမံခန့်ခွဲ။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - အဝတ် Group မှ
အဝတ်အစား Group မှအတွင်းဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် တစ်ခုလုံ့လရှိသူကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပေးထား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ် PACE-အစာရှောင်ခြင်းနှင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်၌တည်၏။ တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အဝတ်အုပ်စုတစ်စုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်အတူစတင်တည်ဆောက်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အဝတ်အစားအုပ်စုတစ်စုအမှတ်တံဆိပ်၏အောင်မြင်မှုကို၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဝန်ထမ်းများသည်။ စွမ်းအင်, ရုံးအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအတွင်း၌မကြာခဏကုမ္ပဏီလက်လီကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Calvin Klein, Cath Kidston သူတို့တစ်တွေအတွက်ရှေ့ဆက်ရောင်းအားရွေ့လျားရှိရာသဲခုံလန်ဒန်အဖြစ်ထိပ်ဆုံး rated အမှတ်တံဆိပ်မောင်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအရှိန်အဟုန်-အစာရှောင်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လက်လီပတ်ဝန်းကျင်.
ဒူဘိုင်းမြို့နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အဝတ် Group မှအလုပ်အကိုင်များ
အဆိုပါအဝတ်အစား Group နဲ့နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်က၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သင်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်အစီအစဉ်ကို။ အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီပစ်မှတ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်တစ်ခုအပြည့်အဝနားလည်မှုနှင့်အတူနိုင်ငံတကာနှင့်လတ်ဆတ်သောဘွဲ့ရများကိုဖြစ်ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရရှိနိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ လက်လီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ ကုမ္ပဏီအတွင်း၌မြင့်တက်ဝန်ထမ်းအရည်အချင်းများအဝတ်အုပ်စုသည်ပြောင်းလဲမှုအပြုအမူတွေ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီကယ့်ကို အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်စတင်နိုင်ရန်လိုအပ်သောနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိရန်ကူညီခြင်း အဝတ်အစား Group မှဖြစ်သည်။ သငျသညျအသေးစိတျထဲမှာအုပ်စုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်လက်လီအတွက်အလားအလာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပေါ်အညီအမျှအရေးကြီးသော။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စ, ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဒူဘိုင်းမြို့နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရရှိနိုင်အလုပ်သင်အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်, အုပ်စုနဲ့အလုပ်ရရန်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Google ကအလုပ်အကိုင်များအပိုင်း.
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် - MasterCard ကိုမှာအလုပ်အကိုင်များ
၏ MasterCard ကိုတဦးတည်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီ သူတို့စီမံခန့်ခွဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းဘာမျှမပြော။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, MasterCard No.1 ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးငွေပေးချေမှုစနစ်၏လည်ပတ်။ ထိုအခါကွန်ရက်အတွင်း၌ 85,000,000 ငွေပေးငွေယူဒေတာဘေ့စနေ့တိုင်းကျော်အပြောင်းအလဲနဲ့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, MasterCard, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, ဥရောပ, ကနေဒါ, အာရှ, နှင့်အမေရိကန်အနေဖြင့်ဆက်သွယ်စားသုံးသူ.
အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်အခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည် သူတို့အစာရှောင်ခြင်းအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်,။ စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတွင်းအစိုးရများအဖွဲ့အစည်းများကူညီပေးနေကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်လှစ်တစ်ချိန်တည်းကုမ္ပဏီမှာ။ ငွေပေးချေမှုမှမတူဘဲ, ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ကာတာနိုင်ငံနှင့်ယူအေအီးအဖြစ်ထက်ပိုမို 250 နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပါဘူး။ သင်တန်း၏, Mastercard ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းချက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ကုမ္ပဏီလည်းရှိ 2018 အတွက်ရရှိနိုင်ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုအလုပ်အကိုင်များ.
splash အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး - ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်
သင်တန်း၏, 14 အဘို့နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်နိုင်ငံများ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့သူတို့အားအကောင်းဆုံးအပါအဝင်, အာဖရိက, ဥရောပနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ, ပြီးတော့နောက်တဖန်အိန်ဒိယတို။ တိုင်းတစ်ခုတည်းများအတွက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် ဒူဘိုင်းကယောဘရှာဖွေသူကုမ္ပဏီ တိုင်းလူတစ်ဦးအလုပ်တစ်ခုရဖို့နဲ့ splash နှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုသေချာပါစေ။ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတိုင်းဝန်ထမ်းစိမ်းဖြင့်အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်မျိုးစုံတွင် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်.
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရေရှည်မှာကုမ္ပဏီအတွက် အမြဲရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပျလုပျဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသူတွေကိုရှာဖွေနေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖန်တီးမှုအောင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲဖှယျယူအေအီးကုမ္ပဏီ၌ဤအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်စကားပြော။ အားလုံးပွီးနောကျ, သငျသညျသစ်ကိုပစ်မှတ်များအတွက်အဆင်သင့်ပါပဲနဲ့ပျော်စရာရှိသည်နှင့် 2015 များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ရန်လိုလားပါလျှင် - 2016 ။ တစ်အောင်မှာသုတျ တစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောအရှေ့အလယ်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခြားနားချက်.
ဒူဘိုင်းဂျော့ VACANCY - PR စနစ်အေဂျင်စီ Weber Shandwick
PR စနစ်အေဂျင်စီ Weber Shandwick မှာအလုပ်. ယေဘုယျအားဖြင့် Weber Shandwick မှာအလုပ်စကားပြောသည့်ဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ရန်အလွန်ကောင်းသောလမ်း။ အဆိုပါအခွင့်အလမ်းများကိုဒူဘိုင်းမြို့ကနေလတ်ဆတ်လာကြ၏။ Weber Shandwick နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သငျသညျအိန္ဒိယသို့မဟုတ်ပါကစ္စတန်ကနေကြသည်ကိုပင်လျှင်သင်အံ့သြသွားစေခြင်းငှါ,။ ထိုအခါ မှစ. မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် WhatsApp ကို Group မှစုဆောင်းမှုတွန်းအားပေးအချိန်ကုမ္ပဏီ, သူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာစုဆောင်းမှုနှင့်အတူနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, များသောအားဖြင့်ယင်းကုမ္ပဏီအကြောင်းအရာစာရေးဆရာများနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံမီဒီယာအိုင်တီကလူကိုရှာဖွေနေ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကုမ္ပဏီနှင့်နီးစပ်သူအလုပ်လုပ်ကိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူ.
လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရဘို့ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ် Estée Lauder က
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားအဖြစ်ကြိုးစားကြ Estée Lauder က အသစ်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဤနေရာတွင်စတင်နိုင်ပါတယ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက် ဒီ Top-rated ကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူ။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, Estée Lauder ကရောင်းအားအကြံပေးနီးပါးအမြဲထိပ်ဆုံးလက်လီစတိုးဆိုင်များတွင်ဝန်ထမ်း rated နေကြသည်။ သငျသညျအလုပ်မလုပ်နိုင်သောနေရာနှင့်အတူစတင်ရိုးရှင်းစွာဘယ်နေရာမှာမဆိုဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီ, ဒိုဟာနှင့်အများအပြားကပို၌တည်ရှိ၏။ အဘယ်ကြောင့်သင်ငှားရမ်းထားခံရဖို့ရှေးခယျြထားရပါမည်ဖြစ်ကြောင်း စတိုးဆိုင်နှင့်Estée Lauder ကအတွက် ?. ဤအချက်များပေးထား, သင်ဒူဘိုင်းအတွက် oriented စူပါဝန်ဆောင်မှုရောင်းဖြစ်ကိုချစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းကနေသို့မဟုတ်လျှင်လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရဆိုရင်အနှစ်သာရအတွက်, သင်ကုမ္ပဏီကအကောင်းဆုံးစတင်ကြောင်းရောင်းအားသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကိုအချို့ယခင်အတွေ့အကြုံရှိသည် ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏ကြီးမြတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်.
Cosmetics Counter မန်နေဂျာ ရာထူး
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - Hilti Careers
ဒူဘိုင်းအတွက် Hilti အလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်လိမ့်မည် သစ်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍရှာတွေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်။ သငျသညျ Hilti အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်နေရာလွတ်နှင့်အတူစတင်, သင့်ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်းဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကအတူသငျသညျထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ် filter နိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများအချို့ရှာဖွေနေ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဧရိယာအလုပ်အကိုင်များအဘို့ဤရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေရေးနှင့်အတူသို့မဟုတ်ပင် ယူအေအီးအတွက်ကြည့်တိုင်းပြည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အခုအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမတှေ့နိုငျပါလျှင် သငျသညျအနာဂတျမှာပြီးပြည့်စုံသောဘဏ်လုပ်ငန်းရာထူးများအတွက်သင်၏ CV post သင့်တယ်.
In the hope that your အလုပ်အကိုင်အအိပ်မက်မက် comes over please keep checking every week Hilti Career website asafirm regularly updating jobs in ဗီဇာနှင့်အတူသို့မဟုတ်ဗီဇာအခွင့်အလမ်းများကိုမပါဘဲဒူဘိုင်း။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သငျသညျ့နိုင်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်လျှောက်လွှာကိုအဆုံးသတ် ရုံအနာဂတ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှုအဘို့အစောင့်ပါ။
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် - အင်္ဂါဂြိုဟ် Careers
၏ရည်ရွယ်ချက် အလုပ်ရှာဖွေရေး in Emirates career with Mars company ဤသူသည်သင်တို့အလုပ်အကိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘို့ရှာကြသည်ကားအဘယ်သို့. With this in mind,acompany has many locations across the UAE country and the world. This Dubai job website wants you to stay connected with other people who don’t know ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့. ယောဘသည်မုဆိုးဒူဘိုင်းကွန်ယက်တွင်၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များကိုချစ်။ အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း application ကိုအချိန်ကြာမြင့်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်။
သင်သာသင့်အီးမေးလ်-id ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်စကားများပြောပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, အ ကုမ္ပဏီအကြောင်းကြားတိုင်းအလုပ်မုဆိုးစောင့်ရှောက်မည် သင်၏အသက်တာအတွေ့အကြုံကိုကိုက်ညီသော 2019 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အကြောင်းကိုလာမည့်ကျွမ်းကျင်သူများအကြံဉာဏ်ကို။ အင်္ဂါဂြိုဟ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပင်ကိုပိုပြီးသင်လုပ်နိုင်သည် HR ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူစကားပြောအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရှာတွေ့.
၏ရည်ရွယ်ချက် ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှု, Join our private the Whatsapp Group or simply add your email details below. With this intention, our team will be able to set up job alerts for ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ. ဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအတွက်အိုင်တီအလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အလုပ်အကိုင်များအရောင်းနှင့်စျေးကွက်အလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်။ အလို့ငှာ ဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးအလုပ်ရှာဖွေစုဆောင်းရှာတွေ့နှင့်လည်းဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများရန်သင့်အသေးစိတ်ကိုပေးပို့ပါ။ အဖြစ်မှန်ဂျော့စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မွမ်းမံမှုများအတွက်, သငျသညျရိုးရိုးကသူတို့အဆက်အသွယ်အပိုင်းအီးမေးလ်သို့မဟုတ် comment ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုငျ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းတွေ့ရှိမှုအလုပ် system ကိုကျနော်တို့ထိပ်ဆုံးရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်နှင့်အတူနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ rated ရှာဖွေစုဆောင်း။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ကာတာနိုင်ငံကနေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ clients များရှိခြင်းဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများအားအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များငှားရမ်းချင် အိန္ဒိယကနေလတ်ဆတ်တက်ကြွကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ.
မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲဘို့ချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင် ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်။ လက်ရှိတွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်အတွင်းအငယ်တန်းအဆင့်ဆင့်ကနေလတ်ဆတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုရင်။ ဒူဘိုင်းတွင်အကြီးတန်းအဆင့်ဆင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အမှတက်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်အဘူဒါဘီအတွက်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ဌာနများအတွက်အလုပ်အကိုင်အမီလိုက်, ဒူဘိုင်းအတွက် HR ဒါရိုက်တာအလုပ်ရိုးရှင်း admin ရဲ့ ရုံက start များအတွက်ယာဉ်မောင်းရာထူးကိုများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, hotel management ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်များ, offshore position job vacancies , onshore career in Abu Dhabi, sales & marketing senior jobs in Dubai, safety jobs in GCC.
သင့်ရဲ့အဘို့ကိုဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှု join ဖို့အသေးစိတျ industry jobs opportunities on our WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ. Another key point with our company is that သငျသညျဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ထမ်းရှာဖွေသူရဲ့အုပ်စုဆက်ပြောသည်ပါလိမ့်မည်။ အဖြစ်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုဒေတာဘေ့စ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိသူများကိုတိုက်ရိုက်သင်ကဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါအပြုသဘောဘက်တွင်, သင်သိဘူး။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကောင်းသောပေးအပ် လမ်းပြ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။